Ahmedou Ould-Abdallah oo taageray Go’aanka Shiikh Shariif Xukuumadda ku kala diray • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Ahmedou Ould-Abdallah oo taageray Go’aanka Shiikh Shariif Xukuumadda ku kala diray
Ahmedou Ould-Abdallah oo taageray Go’aanka Shiikh Shariif Xukuumadda ku kala diray
May 17, 2010 - By: Hanad Askar
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo taageeray goâ€™aanka Madaxweyne Sheekh Shariif uu ku kala diray xukuumadda
Nairobi, 17 May â€“ Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ahmedou Ould-Abdallah, ayaa maanta sheegay inuu si buuxda u taageersanyahay goâ€™aanka Madaxweyne Sheekh Shariif uu gaaray kuna saabsan xukuumadda, ka dib markuu ogolaaday iscasilaadda Guddoomiyaha Barlamaanka Sheekh Adan Madoobe. Ergeyga Gaarka ah wuxuu yiri waxaan jeclahay inaan arko in Guddoomiyihii hore ee Barlamaanka uu ogolaado inuu ku soo biiro Golaha Wasiirrada cusub siduu madaxweynuhu ugu baaqay.
â€œIyadoo uu soo waajahay qalalaase dheer ee aan loo baahnayn oo weeciyay kharash, awood iyo dareenba, Madaxweynuhu wuxuu qaatay goâ€™aan habboon oo geesinimo ku jirto si uu u xalliyo ismariwaagii jiray. Waxaan jecelahay inaan fursadan ka faaâ€™idaysto oo aan Madaxweynaha ku dhiirrigeliyo hogaanka wanaagsan ee uu muujiyay waxaana ugu baaqayaa dhammaan xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliyeed iyo xubnihii hore ee golihii wasiirrada inay taageeraan Madaxweynaha. Tan waa fursad ku habboob in lagu soo magacaabo Gole Wasiirro oo ka tayo badan kii hore, oo aan rajaynayo inuu si aad ah u hormarin karo Geeddi Socodka Nabadeed ee Jabuuti golahaasoo si wanaagsan ugu adeegi doono dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan, keeni doonana isla xisaabtan dheeraad ah. Waxaan ku kalsoonahay in doorashada Guddoomiyaha cusub ay noqoto mid furan oona hufan.â€
â€œMadaxweynuhu wuxuu isku halleyn karaa taageerada Qaramada Midoobay iyo Bulshada Caalamka xilligan hadda la joogo. Waxaan qaswadayaasha iyo kuwa qalalaasaha ka faaâ€™idaysanaya uga digayaa inay soo farageliyaan xaaladda hadda taagan,â€ ayuu yiri Md. Ould-Abdallah.
â€œWaxaan Bulshada Caalamka ugu baaqayaa inay taageero dhab ah oo la taaban karo siiyaan Madaxweynaha iyo Golihiisa Wasiirrada ee soo socda.Â Si tan loo gaaro, waxaa loo baahanyahay in dabacsanaan laga muujiyo bixinta kaalmada caalamiga oo laga dhigo mid waxtar leh oo dhacda waqtigii loogu talagalay.
Madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay goâ€™aankiisa shir jaraaâ€™id uu maanta dhuhurnimadii ku qabya magaalada Muqdisho.
â€œShirka Istanbul ee loo qabanayo Soomaaliya wuxuu dhacayaa toddobaadkan dhammaadkiisa, annaga dhammaanteena waxaan ku hanweynahay inaan Madaxweyne Sheekh Shariif kula kulano munaasabaddan muhimka ah oo ay soo wada qabaqaabiyeen Qaramada Middobay iyo Dowladda Turkey,â€ ayuu yiri Md. Ould-Abdallah.